श्रीकृष्ण जनमाष्टमीको महिमा – Mission
20 September 2020 | आइतवार, अशोज ४, २०७७
श्रीकृष्ण जनमाष्टमीको महिमा
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, साउन २७, २०७७
श्रीमदभागवतगीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ कि यज्ञ, दान तथा तपस्या यी ३ कर्म कुनै समयमा पनि मानिसले छोड्ने काम गर्नु हुदैन । मानिसले आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर शास्त्रको आज्ञालाई परिपालन गर्नु आवश्यक छ । शास्त्रमा तप अन्र्तगत व्रतको महिमा वताईएको छ । सामान्यतया व्रतहरु मध्य श्रीकृष्णष्टमी व्रतलाई निकै महत्व दिइएको छ ।
भाद्रकृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिका दिन भगवान श्रीकृष्णको जन्मभएको थियो । आज विश्वका अधिकांश ॐकार ध्वनीले उहांको व्रत वसेर महिमा सुन्ने प्रचलन छ । यो व्रत महिलातथा पुरुषले लिन मिल्दछ । अशक्त, बृद्ध, बालक तथा रोगीलाई शास्त्रले छुट समेत दिएको छ । यसको महिमा यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ ।
भाद्र महिनाको अष्टमीको दिन भगवान श्रीकृष्णको व्रत वस्ने तरिका यस्तो छ । शुद्ध वाचोखो कपडा वा वस्त्र लगाएर पूजा गर्ने स्थानमा वसेर फूल, अक्षता तथा चन्दन सहित विभिन्न सामग्री लिएर पूजाआजा गर्ने । दियो वावत्तितयार गर्ने । कर्मपात्र, तिलकुश, जौं, शुद्धजल, चन्दन, अक्षताको सामग्रीहरु तयार गर्ने । सके ब्राह्मण बोलाउने नसके आफैले भगवान श्रीकृष्णको तस्विर तथा मूतर््िामा पूजा आजागर्ने । भएमा शंख तथा घण्टको पनि पूजा गर्ने । सर्सियुं, दह, दुवो लगायतका सामग्रकिो पनि निर्माण गर्ने ।
अक्षता, त्रिकुटी राखेर अर्घ स्थापना गर्ने । गाईको दुध, दहि, जल, चन्दन, तिल लगायत फलफुल पनि चढाउने । दिपवावत्ति, कलश र गणेश भगवानको यथामति विधिले पूजाअर्चना गर्ने । विभिन्न पातहरु पञ्चपल्लव चढाउने । कपडा चढाउने । जनै, सुपारी, अविर सिन्दुर, तिल, जौं, पञ्चामृत, मोदक लगायत फलहरु पनि अर्पण गर्ने । भए नरिवल पनि चढाउने । मह, घ्यू, दहि पनि अनिवार्य चढाउने । यसको आफ्नै खालको पूजा अर्चन छ । सबै यसमा उल्लेख गर्न गाहे छ । यस कथाको मूलमर्म यस्तो छ ।
परापूर्व समयमा राजाहरुका वंशमा उत्पन्न भएका कैयन दुष्टले सताएको वेलाभारीले थिचिएको पृथ्वी ब्रहको शरणमा पुग्दी भइन् । तव अन्र्तयामी ब्रहजीले भूमिलाई पापीहरुका पापका भारले लच्किएको जानेर सबै देवताहरुको भेला गराएर श्वेत दिपमा आएका थिए । जहां ब्रहजी एकाग्र भएर भगवान श्रीकृष्णको प्रार्थना गरे । यो बुझेर भगवान श्रीकृष्णले त्यो भार हटाउने काम भयो । जहां क्षेत्रीय कुलमा जन्म लिएका, आफ्ना रजोगुणी धर्ममा लागेका निकै ठुलो बल तथा पराक्रमले युक्त भएका सबै दानवहरुलाई कुनउपायले मार्ने ? भन्ने वारेमा स्वयम् आफैले वताएका छन् ।
सन्तानको ईच्छा भएका बसुदेव तथा देवकी दुवैले भक्तिपूर्वक तपस्या गरेकाले पुत्र होस् भन्न्ो वरदान दिएका थिए । त्यो वरदानको लागि स्वयम् उनिहरुको कोखमा पुत्र भएर जन्मिने वचन दिएका थिए । देवताहरु तथा देवस्त्रीहरु पनि आआफ्ना अंशले पृथ्वी तलमा उत्पन्न होउन् । योगमाया पनि नन्दकी यशोदा स्त्रीमा उत्पन्न हुने छिन् । देवकीको गर्भमा गर्भवास लिएर अनन्त धाम बलभद्रलाई तंहाबाट निकालेर त्यो गर्भ चांडै नै रोहिनीको गर्भबाट निकालेर सार भन्ने आदेश दिएका थिए । भगवान श्रीकृष्णले । देवकीको गर्भमा वसेका भगवान श्रीकृष्ण वसुदेवको साथमा झ्यालखानामा रहेकी देवकीका ६ वटा सन्तान उग्रेसनको छोरा कंशले मारिदिएपछि भाद्र महिनाको कृष्णपक्षको रोहिणी नक्षत्रले युक्तभएको अष्टमीको रातमा सबै सुतिरहेको समयमा ठिक १२ बजे आधारातको समयमा सारा शुभग्रह मिलेको समयमा ह्ृदयको आशय प्रशन्न भएको वेलामा चतुरर्बाहु रुपले भगवान श्रीकृष्ण जन्मेका थिए ।
त्यस वेला एकातिर हर्ष तथा अर्कातिर शोकमा रुमलिएका कंसदेखि अति नै डराएका वसुदेवले पनि हात जोडेर स्तुति गरेका थिए । ति अवतारी सामान्य बालकलाई गोकुल लैजाने तयारी गरियो । नन्दको घर गोकुलमा पुगेर यशोदाको ओछ्यानमा राखेर अर्काे कन्या सहित कारागारमा गएका थिए । ति कन्यालाई हात गोडा बांधेर राखेपछि ति कन्या निकै रुन लागिन् । यो रुवाइको शब्दको कारण उठेका पालेहरुले कंसलाई खवर गरे । कंसले ति कन्यालाई लिएर ढुंगामा पछारेको थियो । ठिक त्यसै वेला कन्या हातबाट फुत्किएर आकाशमा गएर भनिन् हे मूर्ख कंस मलाई मारेर केहि हुदैन तर तलाई मार्ने त अन्यत्रै जन्मलिईसकेको जानकारी गराइन । त्यो सुनेपछि कंसले जंगल, हावा, पानी, सह, गाउं, गोठ लगायतका ठाउमा मार्नकालागीआदेश दियो । गोकुलमा जन्मिएका बालकलाई मार्दै हिड्ने पुतनाले आपूmलाई दुध पियाउन लाग्दा प्राण जाने गरी मारिदिएकाा थिए श्रीकृष्णले ।
तृर्णा वर्त, वकारिष्ट, धेनुक केशी लगायतका दुष्टलाई मारिसकेका थिए श्रीकृष्णले । अनि मथुरामा गएर कंस लगायतका धेरै दानवहरुलाई मारेर आफ्ना भाइबन्धु, बान्धव लगायत समस्त ज्ञानीको आदर पूर्वक सम्मान तथा खुसी दिएका थिए श्रीकृष्ण भगवानले । देवकी तथा वसुदेवले भगवानलाई आफ्नो काखमा राखे ।
मल्लभूमिमा चाणूर मूख्य भएका पहल मानहरुलाई समेत मारेर कुवलया पीड हात्तीले कंसका अनेक भाइहरुलाई समेत मारेका थिए । यसप्रकार सारा लोकमा ति पापिष्ट कंसका लगायतका दुष्टजनको अन्त्यगर्ने कामपछि निकै ठूलो उत्सवमनाउने काम गरियो । हे कृष्ण हे कृष्ण, हे महायोगी, हे भक्तजनहरुको रक्षा गर्ने वाला, अभय प्रदान गर्ने, शरणमा आउने रक्षा तथा मरण खाज्नेको छेद गर्न सक्ने हजुरको जन्मदिनकहिेले हो ? जानेका कोही छैनन् भनेर स्तुति गरेपछि भगवान श्रीकृष्णले वताएको यो दिनमा नै श्रीकृष्ण भगवानको आराधना गरिन्छ ।
यसको लागि दश अक्षरी “ॐ नमोभगवते वासुदेवाय”भन्ने मन्त्रले उनको पुजाअर्चन गर्ने । त्यसपछि बलदेवका साथमा रहेकी गुणले शाभित भएकी रोहिनीलाई, नन्दलाई, यशोदालाई, गोपीहरुलाई, गोपहरुलाई, सारा गौमातालाई, योगमाया समेतलाई नाम उच्चारण गरेर पुजाआजा गर्ने । यस प्रकारको व्रतको प्रभावले मनमा चिताएको पुग्ने तथा मृत्यु पश्चात पनि विष्णुलोक वा वैकुण्ठलोक पाउन सकिन्छ । तर अविवेक तथा घमण्डको कारण यस व्रतको उपहास गर्दछ त्यो संसार रुपी गुफामा रहेर अकालमा समेत मृत्यु हुन्छ । त्यसकारण सकभर व्रत बस्ने कामगरौ नभएपनि यस व्रतको उपहास नगरौं ।
भगवानश्रीकृष्णले भन्नु भएको छ । संसारमा विभिन्न धर्मका मानिसहरु रहने छन् । ति मानिसको आआफ्नै धर्म तथा परम्परा रहने छ । तर कसैले पनि अन्ने धर्मको उपहास गर्ने काम गर्नु हुदैन । किनकि संसारमा भगवान एउटै छन् मात्र फरक के हो भने नाम तथा भगवान मान्न्ो चालचलन फरक रहने छ । संसारका सबै धर्म गुरुहरुले पनि सत्य, सेवा तथा भाव र कर्मबाट मात्र सबै थोक प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसकारण कलियुगको अन्त्यतिर यहाँ हत्या, आतंक, बलतकार, दुष्टाचार लगायत भ्रष्चार गर्नेहरुको बाहुल्यता हुदा धर्म तथा कर्म र आस्थामा रहने मानिसको रक्षागर्न म स्वयम् मानवभएर आउने छु । त्यस्ताको रक्षातथा दुराचारी र पापीको नष्ट गर्ने छु भन्नु भएको आधारहरु हिन्दु दर्शनमा उल्ल्ेख छ
धर्मशास्त्रको उदेश्य मूख्य रुपमा मानव आचरणलाई नियमित र नियन्त्रित गर्नमा निहित रहेको पाइन्छ । धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष मध्ये मानव जीवनको परम पुरुषार्थ मोक्ष हो । यस कारण मानिसले मोक्ष प्राप्तिमा आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने कार्यमा लाग्नु आजको कलियुगको आवश्यकता हो । यो आधार जीवित अवस्थामा पनि प्राप्त गर्न सकिने आधार धर्मशास्त्रमा चर्चा गरिएको छ । यो समयमा शान्ति तथा आनन्दको निकै अभाव देखिएको छ ।
मानव समाजमा दिनप्रतिदिन विक्षिप्त तथा अशान्तको वातावरण बढ्दै गएको आधारहरु हामीले दिनप्रतिदिन सञ्चार माध्यममा अध्ययन गरिरहेका छौं । जसको संरक्षण तथा संवद्धन गर्न ॐ कारलाई मूलमन्त्रमान्नेहरुको चेतना जगाउने काममा लाग्ने काम हाम्रो हो । यसका लागि हामीले हाम्रा बाबाआमा, काकाकाकी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, गुरु पुरोहित, गाई लगायतको सम्मान गरेर सबैबाट आर्शिवाद लिने काम गर्नु नै यसको परिपालन तथा हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ । आजका मानिसमा यो धारणाको कमि भएको कारण नै दिन दहाडै हत्या आतंक, बलत्कार चोरी, डकैति तथा अभाव र आलस्यता बढेको हो । हामीले हाम्रो कर्तव्य के हो ? हामीको हो ? हामीले के गर्न हुन्छ तथा के गर्न हुदैन । त्यसकारण पनि आजका दिनमा यस व्रतको आवश्यकता तथा महत्व बढ्दै गएको छ ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, साउन २७, २०७७ 8:57:17 AM |
Prevभेरीको पीसीआर ल्याबमा अटोमेटिक मेसिन, अब दैनिक एक हजारको स्वाब परीक्षण गर्न सकिने
Nextआज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, खुल्ने छैनन् मन्दिर, हुनेछैन रथ र शोभायात्रा